Axial azo alentika any Sina, mpamokatra sy mpamatsy onja mikoriana | KAIQUAN
Paompy mikorontana mifangaro anaty rano
Mikoriana: 460-90000m3 / h
Loha: Mahatratra 22m
Afaka mitondra rano madio sy loto maloto izy: ary ny sombintsombiny mandalo be indrindra dia tsy mihoatra ny 100mm
ZQHQ Series Submersible Axial, Pump Flow Mixed
Axial azo asitrika, Mifangaro FIVA Pump tombony:
1. Fifanarahana ambony
(1) Afaka mitondra rano madio sy rano maloto maivana, miaraka amin'ny hafanan'ny haino aman-jery hatramin'ny 40 ℃ ary ny lanjan'ny PH 4-10; Ny savaivony faran'izay potika azo zahana dia 100mm.
(2) Fampiharana: famatsian-drano an-tanàn-dehibe, tetik'asa fanodinkodinana, ireo rafitra maloto ao an-tanàn-dehibe sy ny lalan-drano, ny asa fanasitranana ny rano maloto, ny rafi-pitetezana ny tobin-jiro, ny famatsian-drano sy ny lakan-drano ho an'ny dock, ny fanodinana ny hub-n'ny rano, ny fanondrahana sy ny fantsakana, ny fiompiana anaty rano sns. Ny paompy mikitroka axial azo alentika miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta sy ny fahombiazan'ny fanoherana rongony, dia mety amin'ny fotoana misy fiovan'ny rano be sy ambony loha, izay ambanin'ny 20m amin'ny ankapobeny.
2. Fampiasam-bola kely kokoa amin'ny tobin-tsolika, ary ny fitantanana sy ny fitantanana mora
(1) Ny paompy dia miasa ao anaty rano, tsy dia mila asa an-tany sy injenieraly firafitra amin'ny fananganana tobim-pamokarana ary koa ny faritra fametrahana kely kokoa. Vokatr'izany, ny vidin'ny fananganana dia azo ahena 30-40%
(2) Ny fampidirana motera sy paompy dia mamonjy fotoana sy fandaniana amin'ny fomba fiasa eo an-toerana ny fomba fiasan'ny 'moto - transmission - centre de axe pump' ', ka mitondra fametrahana mora sy haingana eo amin'ny toerana.
(3) Fitantanana mora, ary mora ny fitantanana sy ny fandidiana.
(4) Mora ny miasa amin'ny fanaraha-maso lavitra sy mandeha ho azy.
(5) tabataba ambany, tsy misy faritra maripana avo amin'ny tobin-tsolika; miantoka tsara ny tontolon'ny asa; Toeram-paompy ambanin'ny tany tanteraka azo namboarina araka ny takiana, mba hitazomana ny fomba sy ny endrika tontolo iainana amin'ny tany.
(6) Safidy tsara indrindra hamahana ireo olana amin'ny fisorohana ny tondra-drano amin'ireo motera napetraka ao amin'ireo toby paompy izay manamorona ny renirano sy ny farihy misy fiovaovan'ny haavon'ny rano. Ho fanampin'izany, amin'ny fitehirizana ny axis lava sy ny bearings eo anelanelan'ny motera sy paompy dia mety hihazakazaka sy azo antoka kokoa ilay singa.
3. Tena azo itokisana, tsy misy hovitrovitra, ary tsy mitabataba
(1) Miaraka amin'ny maodely hydraulic tsara, alaivo antoka ny fepetra takian'ny mpampiasa. Fifanakalozam-bola amin'ireo maodely nentim-paharazana nofidian'ny mpampiasa. Misy andiam-paompy ireo, izay manana ambaratonga avo lenta avo lenta, azo ampiharina amin'ny toe-javatra iasana, fahombiazan'ny angovo avo, ary vidin'ny fandidiana ambany.
(2) Ny tombo-kase mekanika indroa na telo dia misoroka ny famoahana. Nasiana fanosorana fanosotra manokana namboarina tamin'ny famolavolana firafitra mirindra sy ny androm-piainana maharitra.
(3) Miaraka amin'ny insulateur F, ary tonga miaraka amin'ny fiarovana ny mari-pana, fanaraha-maso, fantsom-pivoahana ary singa fampitandremana hafa.
(4) Miaraka amin'ny fepetra mangatsiatsiaka tsara azo alentika ao anaty rano, miorina amin'ny fihenan-jotra kely, ary ny tabataba ambany.
Teo aloha: Paompy azo alentika ao anaty rano
Manaraka: Paompy azo alentika ao anaty rano (0.75-7.5Kw)
Fialana anaty rano azo alentika, diagram fifangaroana paompy mikoriana
Fialan-tsasatra azo alentika, diagram sy famaritana paompy mikoriana mikoriana
manokatra paompy rendrika tsara
vidin'ny paompy rendrika
paompy azo alentika
paompy fanerena rano